OwayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseCanada uxwayisa ngokuthi umhlaba usengozini enkulu nokuthi isikhathi siyaphela - I-Afrikhepri Fondation
ngoLwesine, Ephreli 22, 2021
DKule vidiyo, owayenguNgqongqoshe Wezokuvikela waseCanada uPaul Hellyer unboxes konke, futhi uxwayisa umhlaba, umemezela ukuthi umhlaba usengozini enkulu nokuthi isikhathi sesiphelile. Lo mlayezo ekuqaleni ubizwa ngokuthi ukudalulwa okugcwele, okusho ukudalulwa okugcwele noma ukunqanyulwa okugcwele. Ubuye alethe incwadi yakhe i-mafia yemali, izwe elisenkingeni.
Izinkinga zethu aziyona eyemvelo, zidalwe yicukuthwane elincane kakhulu labantu abacebile abalambele amandla, abagcine umphakathi ungazi lutho, uthi, bese usho izinhlaka ezahlukahlukene ezingakhethwanga ezisebenza isithunzi, ngenhla ibhokisi lasebhange nezezimali lilandelwa yinkampani kawoyela kanye nenhlangano yenhlangano. Uhlelo lwabo ukwakha umbuso omusha, bawubiza ngokuthi yi-New World Order (NWO).
Ikhuluma ngezihloko ezahlukahlukene, ngomzamo wokwazisa umhlaba ngeqiniso nokudalulwa okugcwele, kusukela engozini yeRoswell (kanye nokuba khona kwezinye izinhlobo zezinto eziphilayo) kuya ekuthathweni kwezinga eliphakeme, inkinga yezikweletu. noma umkhonyovu kaSepthemba 11, i-TTIP, uhlelo lwe-ponzi olwenziwe ngamabhange nokugqilazwa kwabantu. Ekugcineni umemezela ukuthi sisalelwe yizinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba senze into ebucayi.
isigaba IZINDABA ZEBHIZINISI
IMorobha yakha yaseshashalazini enkulu kunazo zonke e-Afrika